သံသရာဆိုတာလည်တယ် - 9style
ဝေဠုကျော်ကို တရားစွဲဆိုထားသူ မသင်းသင်းနဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် နေတိုးတို့ဓာတ်ပုံများထွက်ပေါ်လာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်းရုပ်ထု စိုက်ထူလိုက်ပြီ
လူတွေက ပုဂံဆိုရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လောက်ပဲသိတယ် ဆိုတဲ့ လူမင်း
အလုပ်နဲ့မိသားစု ယှဉ်လာရင် မိသားစုကိုပဲ ဦးစားပေးပါလို့ ဆိုလာတဲ့ စီအီးအို
(ပန်ဆယ်လိုထပ်ပြောပြီ)-ဒီနေ့ချမှတ်လိုက်တဲ့အမိန့်ကတော့ အံ့သြဖွယ်ရာ ၁၇နှစ်ပါတဲ့
March 12, 2018 March 12, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEKNOWLEDGE
အိပ်ယာကနိုးပေမယ့် ရုံးပိတ်ရက်မို့ ထမသေးပဲ နှပ်နေသော သူ မိန်းမရဲ့ ခပ်တိုးတိုးစကားကြောင့် ခေါင်းထောင်သွားသည်။ “ဘာဖြစ်​လို့လဲမိန်းမရဲ့ ”
“ဘုရားပန်းတွေဝယ်လာတာတဲ့ ၊ ကျူးလစ်ပန်း. တွေလေ ..တခက်တခက်ကိုဈေးကြီးပေးပြီး ပန်း ကျတော့ ပွင့်အာပြီးကြွေကျတော့မယ် ရှောက်ရွက် ကလည်း နွမ်းဖက်နေတာပဲ စိတ်ညစ်တယ်”
” အော်… မိန်းမရယ်။ ဘာများဖြစ်တာလည်းလို့ ..တခါတခါရောင်းမှားဝယ်မှားဖြစ်တာနေမှာပေါ့ ”
“အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်လို့ပေါ့ မောင်ရယ် ။မောင့်ကို သာ အခုမှပြောပြတာ။အမေအဲ့လိုဖြစ်နေတာ ကြာပြီ။ ဘာလုပ်လုပ်စိတ်ထဲကမပါတာလား မသိဘူး ၊ဟိုတခါလည်းဝက်သားဝယ်လာတာ ဝက်သိုးသားဖြစ်နေတော့ အနံ့နဲ့တင်ချက်နေရင်း ခေါင်းတွေကိုက်လာလို့ သွန်ပစ်လိုက်ရတယ်။ နုငယ်တို့က လခစားဝန်ထမ်းတွေလေ၊တလ တလ အလျင်မီအောင်သုံးရစွဲရတာ …အခုဆို ရက်ကြာ ကြာ ထားရမယ့်ဘုရားပန်းကိုထပ်ဝယ်ရတော့မယ် ၊လေလွင့်တာပေါ့..ကဲ ထ၊ ရှင့်အကိုရောက်နေတယ် ။ နုငယ် အိမ်ယာတွေသိမ်းလိုက်ဦးမယ်”
မိန်းမဖြစ်သူရဲ့အပြောကလည်းမှန်နေသဖြင့် သူဘာမှစောဒကတက်မနေတော့ ။ နောက်မျက်နှာ သစ်ရန်အိပ်ယာမှထပြီးဖေးကိုထွက်လာတော့ အမေက သူ့ကို ပြုံးရွှင်စွာဖြင့်
“သား မျက်နှာသစ်၊ မင်းအကိုကြီးလည်းအိမ်ရှေ့မှာရောက်နေတယ် …အမေ ထမင်းကြော်ထားတယ်။ငယ်ငယ်က သားတို့ကြိုက်သလို ဆနွင်းလေးနဲ့ဝါဝါလေး။ အမေနွှေးထားလိုက်မယ်နော် ”
အမေ့ကိုခေါင်းညိတ်ပြရင်း မျက်နှာမြန်မြန်သစ်ကာ ထမင်းစားပွဲမှာထိုင်တော့ အမေက အငွေ့ ထောင်း ထောင်းထနေသော ထမင်းကြော်ကို ငါးနီတူ ခြောက်ကြော်လေးနှ့င့်တွဲကာလာချပေး သည်။ စားနှင့်နေပြီဖြစ်သော အကိုကြီးနှင့်အမေ့ကို ပြုံးပြပြီး သူတဇွန်းခပ်စားလိုက်တော့ ဆနွင်းနံ့ မပျောက်သေးသော ခပ်ငံငံ ထမင်းကြော်က သူ့ကိုစိတ်ညစ်သွားစေသည်။ ကြိတ်မှိတ်မြိုချရင်း အမေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ အမေ့မျက်နှာက သားဖြစ်သူစားကောင်းမကောင်းကို အကဲခတ်ဟန်ဖြင့်
“ကောင်းရဲ့လားသား ၊ ဘာလိုသေးလည်း”
“မလိုပါဘူးအမေရဲ့ …အမေ့လက်ရာက ဟိုးအရင်ကအတိုင်းပဲ စားကောင်းနေကျ ”
သူမဖြေခင် အကိုကြီးကအရင်ဖြေသည်။ အကိုကြီးရဲ့မျက်နှာကို သူတအံ့တသြကြည့်မိသည်။ အသက်ခုနစ်ဆယ်အရွယ် အမေ့မျက်နှာက ပီတိတဝေဝေနှင့် ပြုံးရွှင်စွာ။သူကတော့ ဆက်မစားလိုတာကြောင့် ကော်ဖီခွက်ကို ယူကာသောက်ရင်း အမေ့အလစ်ချောင်းနေမိတော့သည်။
“အမေကလည်းနော် …စောစောစီးစီး သတိထားမှပေါ့ အမေရယ် ၊စိတ်တွေညစ်လိုက်တာ ”
မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ အသံကြောင့် သူပက်လက်ကုလားထိုင်မှာထိုင်ပြီး သတင်းစာဖတ်နေရာက နားစွင့်လိုက်မိသည် ။ မိန်းမရဲ့ ခပ်တိုးတိုးရေရွတ်သံကိုကြားသော်လည်း အမေ့အသံကိုမကြားရတာမို့သူထိုင်နေရာက အသာထကာ မီးဖိုချောင်ဖက်သွားကြည့်တော့ ထမင်းစားပွဲမှာ ထမင်းချိုင့်ထည့်နေသော မိန်းမက သူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်း
“မောင်ရေ ၊ ရုံးသွားခါနီးမှ အလုပ်ပေါ်ပြီ ။ အမေရယ် အိမ်သာသွားရင်းလမ်းမှာ ထွက်ကျလို့”
သမီးဖြစ်သူ အိအိက အမေ့ခြေထောက်တွေကို ရေဆေးပေးနေသော်လည်း မျက်နှာကမကျေနပ် သလို ပါးစပ်ကလည်း ပွစိပွစိပြောနေတာကြောင့် သူအခန်းထဲကနေ ထမီတစ်ထည်ယူကာ အမေ့ကို လှမ်းပေးလိုက်သည် ။ သူ့ကိုမြင်တော့ အိအိက ဘာမှဆက်မပြောတော့ ။ အိမ်နောက်ဖေး အိမ်ပေါက်ဝမှာ ရပ်နေသောအမေက သူ့မျက်နှာကို အားနာစွာကြည့်နေသဖြင့်
“အမေ..ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း ။ ကလေးမဟုတ်သူငယ်မဟုတ် ထွက်ကျရတယ်လို့ ”
“အမေလည်း အိမ်သာကို အမြန်သွားတာပဲ သားငယ်ရယ် ..ဘယ်လိုဖြစ်သွားလည်းမသိပါဘူး ”
အမေ့အသံက ခပ်တိုးတိုးရှိလှသည် ။ ချွေးမကိုအားနာစိတ်၊သားဖြစ်သူကိုရှက်သောစိတ်ကြောင့် မျက်နှာကခပ်နီနီ ။
သူဘာမှ ဆက်မပြောတော့ ။အိမ်ရှေ့မှာ ရုံးက လာကြိုသော ဖယ်ရီရောက်လာသဖြင့် စကားဖြတ် ကာ သူနှင့်တပါတည်း ယူစရာရှိတာတွေကို ယူပြီး ရုံးကားပေါ်တက်ထိုင်လိုက်သည် ။ ခဏနေမှ မိန်းမက သုတ်သုတ်ပြာပြာနှင့်ကားပေါ်တက် လာသည် ။
” ဒီနေ့ မမနု နောက်ကျတယ် ”
စုစုက ခပ်ပြုံးပြုံးစသည် ။
“နေ့တိုင်းနောက်ကျတယ် စုရေ ..အိမ်က ယောက္ခမကြီးလည်းဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူး ။အခုတလော ဆီးထွက်ကျ ဝမ်းထွက်ကျနဲ့ …၊ အလုပ်ကပင်ပန်းပြီး ပြန်လာရင် ကိုစိုးမောင်တို့က အိတ်ကလေးချ ပန်ကာလေးဖွင့်ပြီး နားနေရော ။ ကိုယ့်မှာသာ ဖတ်သီဖတ်သီနဲ့ သေးစိုဝတ်တွေလျှော် ညနေစာချက် သိမ်းဆည်း ။အားလုံးလည်းပြီးရော အိပ်ချိန်ရောက်ပြီ ။ တနေ့တနေ့ဆိုတာ ဘယ်လိုနေဝင်ပြီး ဘယ်လိုနေထွက်မှန်း မသိတော့တာကြာပေါ့ စုစုရေ ”
သူမိန်းမဖြစ်သူကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည် ။
မိန်းမက သူ့ကိုပြန်မကြည့် ။ပြောချင်ရာပြောလိုက်ရလို့ စိတ်ပေါ့သွားဟန်ဖြင့် ကားပြတင်းပေါက်ကနေ အဝေးကို ငေးနေတာကို တွေ့ရသည် ။ စိုးမောင် သက်ပြင်းဖွဖွချမိသည် ။
အခုတလော အမေ့ပုံစံက ချူချာသလိုထင်ရသည် ။တခါတခါ ဟိုးအရင်သူတို့ငယ်ငယ်က အကြောင်း လေးတွေကို ပြန်သတိရချင်ရနေတတ်ပြီး လက်ရှိမှာ ထမင်းစားပြီးသလားကိုပင် မေ့နေတတ်ပြန်သည် ။ ကြာတော့မိန်းမဖြစ်သူဆီကနေ အသံထွက်လာတော့တာကြောင့် အမေ့ပုံက အားနာသလို နေရခက်နေသလို ဖြစ်နေသည်ဟု သူခံစားရသည် ။
ရုံးပိတ်ရက်ကျရင်တော့ ဆေးခန်းလေးဘာလေးပြကြည့်ဖို့ သူစိတ်ကူးလိုက်သည် ။ သို့သော် သူ့စိတ်ကူးတို့သည် စိတ်ကူးသာဖြစ်ပြီး လက်တွေ့မှာ ဖြစ်မလာနိုင်ခဲ့ ။
” ဟိုတနေ့ကဆို သူ့သားစားမယ့်ထမင်းပန်းကန်ထဲ ရွှေဖရုံသီးဟင်းတွေထည့်ပြီးနယ်ထားတာ ။ ဘေးကနေ မန်းကျီးသီးစိမ်းကြော်လေးပုံပြီး ဇွန်းတပ် ၊ ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက် အဆင်သင့်ချထားတာ …နုငယ်က ဘုရားပန်းလဲနေလို့ မသိလိုက်ဘူး ။အိမ်နောက်ဖေး ဝင်ကြည့်တော့မှ …. တအိမ်လုံးပွစာကြဲနေတာပဲ အကိုကြီးရယ် ။ အမေဘာလုပ်နေတာလည်းဆိုတော့မှ ဒါ..သားငယ်လေး အကြိုက်တဲ့ ၊ ငယ်ငယ်ကဆို အမြဲချက်ကျွေးရတယ်..ချက်ပြီး အဲ့လိုနယ်ဖတ်ပေးမှ သူကစားတာတဲ့ …ဟင်းဟင်း ။သူ့သားက တလုပ်စားပြီးငံလွန်းလို့ဆိုပြီး ဆက်မစားဘူး ”
မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ အပြောကို အကိုကြီးက ပြုံးကာ နားထောင်သည် ။ ပြီးမှ အမေ့ဖက်ကိုကြည့်ပြီး
” အမေက ဘက်လိုက်တယ် ။သူ့သားကျ ချက်ကျွေးတယ်.. သားကိုကျတော့ အဲ့လိုမျိုးလုပ်မကျွေးဘူး ”
အကိုကြီးရဲ့ စကားကြောင့် အမေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားသည် ။ သူ့သားကိုအတော်လေးအားနာသွားဟန် ဖြစ်သွားတာကိုလည်း တွေ့ရသည် ။
“အမေ သွားပြင်လိုက်မယ် …”
အမေ ထိုင်နေရာက ထတော့ အကိုကြီးက လက်ပြကာတားရင်း
” သူတို့အိမ်မှာ ချက်ထားတာတွေ မစားချင်ပါဘူး အမေရာ … သားက အမေကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီး ကျွေးတာကို စားချင်တာ ။အမေ ..သားနဲ့ အိမ်လိုက်ခဲ့နော် ..။သားနဲ့တလှည့်နေပြီးသားကို ငယ်ငယ်တုန်းကလို ထမင်းနယ်ပြီးကျွေးမယ် မဟုတ်လား ”
အမေ့အသံက ရွှင်လန်းလာသည် ။
ကျွန်တော် အကိုကြီး ဝင်းမောင်ရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်မိသည် ။ အကိုက မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြရင်း အမေ့ဖက်လှည့်ကာ
” အမေ ၊ အမေ့အင်္ကျီတွေ သွားယူလေ ..သား တော်ကြာနေပြန်တော့မှာ ”
“အေး ၊ အေး ”
အမေ ထိုင်နေရာမှ ခပ်သွက်သွက်ထကာ အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားမှ အကိုကြီးက သူ့ဖက်လှည့်ပြီး
” အမေ့ကို အကိုခေါ်သွားလိ်ုက်မယ် ။ မင်းတို့လည်းဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့ ကသီလင်တနိ်ုင်မှာပဲ ။ အကိုလည်း တပါတ်တခါ လာလာကြည့်ရတာ ခရီးထောင့်တယ် ..အိမ်ခေါ်ထားလိုက်တော့ အားလုံးအဆင်ပြေတာပေါ့ ၊ အကို့အလုပ်က စာရေးတာဆိုတော့ အပြင်သွားစရာလည်း သိပ်မလိုဘူး ။ခြံထဲမှာ ငါ့တပည့် ဖိုးကဲတို့ မိသားစုရှိနေတော့ အမေလည်း ပျော်မှာပါ ”
မိန်းမမျက်နှာက ပျော်သွားသလို ဝင်းကနဲ ဖြစ်သွားတာကို သူမြင်လိုက်သည် ။သူလည်း စိတ်အေးသွားတာကြောင့် မခေါ်ပါနဲ့ ဘာညာ ပြောမနေတော့ ။ ကြာရင် မိန်းမနှင့်အမေ့ကြား အဖုအထစ်လေးတွေ ရှိလာမယ့်အရေးမှ ကင်းသွားသည်ဟု ဆိုရပေမည် ။ ခဏကြာတော့ အမေ အထုတ်လေးဆွဲကာ ပြန်ထွက်လာသည် ။ ဒါပေမယ့် သူ့ဖက်ကို သိပ်မကြည့် ။
စိုးမောင် အမေ့နားကပ်ကာ အမေ့လက်ကလေးကို အသာဆွဲယူပြီး အမေ့ပါးတစ်ဖက်ကို နမ်းတော့ အမေ မျက်ရည်ဝဲသည် ။
အမေ့စကားက သည်လောက်သာ ။ ဒါပေမယ့် အမေ့မျက်လုံးတွေကတော့ စကားတွေအများကြီးပြောနေသလိုပင် ။ အိမ်ထောင်ကျကတည်းက သူချစ်သောသားဆီမကြာမကြာလာနေရင်း ကလေးဝေယျာဝစ္စတွေကြောင့်စိတ်မချဘူးဟုဆိုကာ မပြန်တော့ပဲအတူတူနေတာမို့ သူ့ကို အမေဘယ်လောက်ချစ်မှန်း သူအသိဆုံးပင် ။ ဒါပေမယ့် အမေက သူ့ကို သိပ်မကြည့်သလို ခံစားရတော့လည်း သူစိတ်မကောင်း ။
ပြန်ခါနီးကျတော့ အကိုကြီးက သူ့ပခုံးကိုဖက်ကာ ခပ်တိုးတိုးပြောသွားသည် ။
“မင်း အမေ့မေတ္တာနဲ့ နယ်ထားတဲ့ ထမင်းကို ကြိတ်မှိတ်စားသင့်တယ် ငါ့ညီ”
အကိုကြီးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး သူ ဘာစကားမှ မဆိုမိ ။
ဒီလောက်ငန်တဲ့ထမင်းကို ဘယ်လိုလုပ်စားမလည်းဟုသာ စိတ်ထဲက စောဒဂတက်မိသည် ။ အကိုကြီးကလည်း သူတို့ကို ဘာစကားမှ ဆက်မပြောတော့ ။အမေ့ကိုသာ အငှားကားပေါ်တင်ပြီး သူ့အိမ်ပြန်သွားသည် ။
“တော်ပါသေးရဲ့ ၊ရှင့်အကိုသာလာမခေါ်ရင် ကျွန်မလည်း ဖုန်းဆက်ပြောမိတော့မှာ။ သူကလူလွတ်မို့ ပြသနာမရှိဘူး ၊အမေဒီလို ဖြစ်နေတာကြာလာလေ ကျွန်မတို့နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လေ ဖြစ်တော့မှာ”
“အဲ့လိုတော့ မပြောပါနဲ့မိန်းမရယ် ၊အမေလည်းသူတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အချိန်က အားလုံးလုပ်ပေးခဲ့တာပဲမဟုတ်လား”
“အမလေး….. ကိုမျိုးချစ်။ အမေကိုထိလို့ကိုမရပါလား။ကျွန်မက အဖြစ်ပြောတာပါတော်။ကျုပ်လည်း ယောက္ခမကို ချီးကလူသေးကလူ ပြုစုရတာ ပါပဲ၊ကိုယ့်မအေတောင်လုပ်ပေးခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူး”
မိန်းမဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီး သူစိတ်ပျက်စွာခေါင်းယမ်းမိသည်။ ထိုနေ့ကစပြီး အမေရော အကိုကြီးပါ သူ့အိမ်ကို သိပ်မလာတော့ ။
သူလည်း အမေ့ဆီကို မရောက်ဖြစ်တော့ ။
တခါတလေ သွားကန်တော့လျှင်တော့ သနပ်ခါးတွေဖွေးနေအောင်လိမ်းထားသောအမေက ပြုံးပြုံးကြီး ဆုတွေပေးသလို ပျော်နေဟန်ကလည်းအတိုင်းသားပင်။
အကိုကြီးကတော့ အမေ့ဆီမကြာမကြာလာဖို့ သတိပေးရှာသည်။
“အမေ ငယ်မူပြန်ချင်နေသည်”ဟုလည်း ခပ်တိုးတိုးသတင်းပေးပေမယ့် အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သူ သူ့မှာ အမြဲမရောက်နိုင်။
ဒါပေမယ့်အမေကတော့ သူလာခြင်းမလာခြင်းကို စောင့်ဆိုင်းမနေတော့ ။အိပ်ယာထဲလှဲနေရင်း ဦးဏှောက်သွေးကြာပြတ်ကာ နှုတ်ဆက်သွားလေတော့သည်။
မျက်နှာပေါ်တဖွဲဖွဲနှင့် မသိမသာစင်သောအထိအတွေ့ကြောင့် သူ အိပ်ယာက လန့်နိုးလာသည်။ မိုးကလည်းသည်းလိုက်တာဟုတွေးရင်း ပွင့်နေသောပြတင်းပေါက်ကို တယောက်ယောက်များလာပိတ်မလားဟု မသိမသာမျှော်နေပေမယ့် တအိမ်လုံး ဘာသံမှမကြားရတာကြောင့်သူ စိတ်လျှော့လိုက်သည်။ ပြတင်းပေါက်တံခါးကိုလေတိုးသံနှင့်အတူ မိုးက တရစပ်ပက်လာသော့ကြောင့် သူ့ အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး စိုထိုင်းလို့လာသလို အပေါ့သွားချင်စိတ်တွေကလည်းထိန်းမရအောင်ဖြစ်၍လာလေသည်။ မဖြစ်။ အိပ်ယာထဲဆီးသွားလို့မဖြစ် ။ အိပ်ယာခင်းစိုထိုင်းထိုင်းနှင့်သူမနေနိုင်။ ဘယ်သူကမှလည်း တခုတ်တရ လာလဲပေးမှာမဟုတ်။ ကိုစိုးမောင် အတင်းချုပ်တီးထားသည့်ကြားမှ ဆီးကထိန်းမရပဲ ထွက်ကျလေတော့သည်။
လေဖြတ်ထားသဖြင့် ဝူးဝူးဝါးဝါးဖြစ်နေသောသူ့အော်သံက မိုးသံတွေကြားမှာ ပျောက်သွားလေသဖြင့် ဆက်ပြီးကြိုးစားမနေတော့။ ဝမ်းနည်းစိတ်က လှိုက်ကနဲတက်လာသလိုမိန်းမဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုလည်း ပြေးမြင်မိသည်။တဖန် သမီးဖြစ်သူအိအိရဲ့ ငြူစူသံ၊ သားမက်ဖြစ်သူရဲ့ နင်ပဲငဆပြောသံတွေကို နားထဲကြားမိပြန်သည်။ “အမေ့ဝဋ်တွေလည်နေပါပြီ အမေရယ်”ဟု စိတ်ကတွေးရင်း အကိုကြီးမဆုံးခင်ပြောခဲ့သောစကားကိုကြားကာ ဝမ်းနည်းစွာ ငိုမိတော့သည်။
“ဒီတံမြက်စည်းကိုကြည့် ငါ့ညီ ၊အသစ်တုန်းကမင်းအိမ်ရှေ့ခန်းမှာထားတယ် ၊ကြာလာတော့ အမွှေးတွေတုံးလာပြီးလှဲမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့တော့ နောက်ဖေးမှာလှဲပြီး အိမ်ရှေ့အတွက်အသစ်ဝယ်တယ်။အဲ့တံမြက်စည်းလည်းဟောင်းလာရင် မင်းနောက်ဖေးပို့ဦးမှာပဲ။ နောက်အသစ်ဝယ်ဦးမှာပဲ။အဲဒီအသစ်ကလည်း တနေ့ကျ ဟောင်းလာဦးမှာပဲ …သံသရာဆိုတာ လည်နေတာငါ့ညီ ။ဒါကြောင့် မင်းတို့တွေ အမေ့အပေါ် နိုင့်ထက်စီးနင်းကြီးမပြောပါနဲ့ ကွာ….။မိဘဆိုတာ အစားထိုးစရာလည်းမရှိဘူး။ရှိနေတုန်းကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရတာ..ဝအောင်ဆပ်ကြပါ ။ မင်းတို့တွေလည်း အိုကြ နာကြဦးမှာပဲ။ တနေ့ကျရင် အသစ်မှန်သမျှဟောင်းကြရတာပါ ။မင်း တရားရစမ်းပါ”
“ကျွန်တော်တရားတွေလည်းကျ ၊ တရားတွေလည်းရပါပြီ အကိုကြီးရယ်။ သေမင်းရယ်…..ကျွန်တော့ကို မြန်မြန်သာလာခေါ်ကြပါတော့ ”
အိပျယာကနိုးပမေယျ့ ရုံးပိတျရကျမို့ ထမသေးပဲ နှပျနသေော သူ မိနျးမရဲ့ ခပျတိုးတိုးစကားကွောငျ့ ခေါငျးထောငျသှားသညျ။ “ဘာဖွဈလို့လဲမိနျးမရဲ့ ”
“ဘုရားပနျးတှဝေယျလာတာတဲ့ ၊ ကြူးလဈပနျး. တှလေေ ..တခကျတခကျကိုဈေးကွီးပေးပွီး ပနျး ကတြော့ ပှငျ့အာပွီးကွှကေတြော့မယျ ရှောကျရှကျ ကလညျး နှမျးဖကျနတောပဲ စိတျညဈတယျ”
” အျော… မိနျးမရယျ။ ဘာမြားဖွဈတာလညျးလို့ ..တခါတခါရောငျးမှားဝယျမှားဖွဈတာနမှောပေါ့ ”
“အဲ့လိုမဖွဈစခေငျြလို့ပေါ့ မောငျရယျ ။မောငျ့ကို သာ အခုမှပွောပွတာ။အမအေဲ့လိုဖွဈနတော ကွာပွီ။ ဘာလုပျလုပျစိတျထဲကမပါတာလား မသိဘူး ၊ဟိုတခါလညျးဝကျသားဝယျလာတာ ဝကျသိုးသားဖွဈနတေော့ အနံ့နဲ့တငျခကျြနရေငျး ခေါငျးတှကေိုကျလာလို့ သှနျပဈလိုကျရတယျ။ နုငယျတို့က လခစားဝနျထမျးတှလေေ၊တလ တလ အလငျြမီအောငျသုံးရစှဲရတာ …အခုဆို ရကျကွာ ကွာ ထားရမယျ့ဘုရားပနျးကိုထပျဝယျရတော့မယျ ၊လလှေငျ့တာပေါ့..ကဲ ထ၊ ရှငျ့အကိုရောကျနတေယျ ။ နုငယျ အိမျယာတှသေိမျးလိုကျဦးမယျ”
မိနျးမဖွဈသူရဲ့အပွောကလညျးမှနျနသေဖွငျ့ သူဘာမှစောဒကတကျမနတေော့ ။ နောကျမကျြနှာ သဈရနျအိပျယာမှထပွီးဖေးကိုထှကျလာတော့ အမကေ သူ့ကို ပွုံးရှငျစှာဖွငျ့
“သား မကျြနှာသဈ၊ မငျးအကိုကွီးလညျးအိမျရှမှေ့ာရောကျနတေယျ …အမေ ထမငျးကွျောထားတယျ။ငယျငယျက သားတို့ကွိုကျသလို ဆနှငျးလေးနဲ့ဝါဝါလေး။ အမနှေေးထားလိုကျမယျနျော ”
အမကေို့ခေါငျးညိတျပွရငျး မကျြနှာမွနျမွနျသဈကာ ထမငျးစားပှဲမှာထိုငျတော့ အမကေ အငှေ့ ထောငျး ထောငျးထနသေော ထမငျးကွျောကို ငါးနီတူ ခွောကျကွျောလေးနှ့ငျ့တှဲကာလာခပြေး သညျ။ စားနှငျ့နပွေီဖွဈသော အကိုကွီးနှငျ့အမကေို့ ပွုံးပွပွီး သူတဇှနျးခပျစားလိုကျတော့ ဆနှငျးနံ့မပြောကျသေးသော ခပျငံငံ ထမငျးကွျောက သူ့ကိုစိတျညဈသှားစသေညျ။ ကွိတျမှိတျမွိုခရြငျး အမကေို့ကွညျ့လိုကျတော့ အမမေ့ကျြနှာက သားဖွဈသူစားကောငျးမကောငျးကို အကဲခတျဟနျဖွငျ့
“ကောငျးရဲ့လားသား ၊ ဘာလိုသေးလညျး”
“မလိုပါဘူးအမရေဲ့ …အမလေ့ကျရာက ဟိုးအရငျကအတိုငျးပဲ စားကောငျးနကြေ ”
သူမဖွခေငျ အကိုကွီးကအရငျဖွသေညျ။ အကိုကွီးရဲ့မကျြနှာကို သူတအံ့တသွကွညျ့မိသညျ။ အသကျခုနဈဆယျအရှယျ အမမေ့ကျြနှာက ပီတိတဝဝေနှေငျ့ ပွုံးရှငျစှာ။သူကတော့ ဆကျမစားလိုတာကွောငျ့ ကျောဖီခှကျကို ယူကာသောကျရငျး အမအေ့လဈခြောငျးနမေိတော့သညျ။
“အမကေလညျးနျော …စောစောစီးစီး သတိထားမှပေါ့ အမရေယျ ၊စိတျတှညေဈလိုကျတာ ”
မိနျးမဖွဈသူရဲ့ အသံကွောငျ့ သူပကျလကျကုလားထိုငျမှာထိုငျပွီး သတငျးစာဖတျနရောက နားစှငျ့လိုကျမိသညျ ။ မိနျးမရဲ့ ခပျတိုးတိုးရရှေတျသံကိုကွားသျောလညျး အမအေ့သံကိုမကွားရတာမို့ သူထိုငျနရောက အသာထကာ မီးဖိုခြောငျဖကျသှားကွညျ့တော့ ထမငျးစားပှဲမှာ ထမငျးခြိုငျ့ထညျ့နသေော မိနျးမက သူ့ကိုတဈခကျြကွညျ့ရငျး
“မောငျရေ ၊ ရုံးသှားခါနီးမှ အလုပျပျေါပွီ ။ အမရေယျ အိမျသာသှားရငျးလမျးမှာ ထှကျကလြို့ ”
သမီးဖွဈသူ အိအိက အမခွေ့ထေောကျတှကေို ရဆေေးပေးနသေျောလညျး မကျြနှာကမကနြေပျ သလို ပါးစပျကလညျး ပှစိပှစိပွောနတောကွောငျ့ သူအခနျးထဲကနေ ထမီတဈထညျယူကာ အမကေို့ လှမျးပေးလိုကျသညျ ။ သူ့ကိုမွငျတော့ အိအိက ဘာမှဆကျမပွောတော့ ။ အိမျနောကျဖေး အိမျပေါကျဝမှာ ရပျနသေောအမကေ သူ့မကျြနှာကို အားနာစှာကွညျ့နသေဖွငျ့
“အမေ..ဘယျလိုဖွဈတာလညျး ။ ကလေးမဟုတျသူငယျမဟုတျ ထှကျကရြတယျလို့”
“အမလေညျး အိမျသာကို အမွနျသှားတာပဲ သားငယျရယျ ..ဘယျလိုဖွဈသှားလညျးမသိပါဘူး ”
အမအေ့သံက ခပျတိုးတိုးရှိလှသညျ ။ ခြှေးမကိုအားနာစိတျ၊သားဖွဈသူကိုရှကျသောစိတျကွောငျ့ မကျြနှာကခပျနီနီ ။
သူဘာမှ ဆကျမပွောတော့ ။အိမျရှမှေ့ာ ရုံးက လာကွိုသော ဖယျရီရောကျလာသဖွငျ့ စကားဖွတျ ကာ သူနှငျ့တပါတညျး ယူစရာရှိတာတှကေို ယူပွီး ရုံးကားပျေါတကျထိုငျလိုကျသညျ ။ ခဏနမှေ မိနျးမက သုတျသုတျပွာပွာနှငျ့ကားပျေါတကျ လာသညျ ။
” ဒီနေ့ မမနု နောကျကတြယျ ”
စုစုက ခပျပွုံးပွုံးစသညျ ။
“နတေို့ငျးနောကျကတြယျ စုရေ ..အိမျက ယောက်ခမကွီးလညျးဘာဖွဈမှနျးကိုမသိဘူး ။အခုတလော ဆီးထှကျကြ ဝမျးထှကျကနြဲ့ …၊ အလုပျကပငျပနျးပွီး ပွနျလာရငျ ကိုစိုးမောငျတို့က အိတျကလေးခြ ပနျကာလေးဖှငျ့ပွီး နားနရေော ။ ကိုယျ့မှာသာ ဖတျသီဖတျသီနဲ့ သေးစိုဝတျတှလြှေျော ညနစောခကျြ သိမျးဆညျး ။အားလုံးလညျးပွီးရော အိပျခြိနျရောကျပွီ ။ တနတေ့နဆေို့တာ ဘယျလိုနဝေငျပွီး ဘယျလိုနထှေကျမှနျး မသိတော့တာကွာပေါ့ စုစုရေ ”
သူမိနျးမဖွဈသူကို လှမျးကွညျ့လိုကျသညျ ။
မိနျးမက သူ့ကိုပွနျမကွညျ့ ။ပွောခငျြရာပွောလိုကျရလို့စိတျပေါ့သှားဟနျဖွငျ့ ကားပွတငျးပေါကျကနေ အဝေးကို ငေးနတောကို တှရေ့သညျ ။ စိုးမောငျ သကျပွငျးဖှဖှခမြိသညျ ။
အခုတလော အမပေုံ့စံက ခြူခြာသလိုထငျရသညျ ။တခါတခါ ဟိုးအရငျသူတို့ငယျငယျက အကွောငျး လေးတှကေို ပွနျသတိရခငျြရနတေတျပွီး လကျရှိမှာ ထမငျးစားပွီးသလားကိုပငျ မနေ့တေတျပွနျသညျ ။ ကွာတော့မိနျးမဖွဈသူဆီကနေ အသံထှကျလာတော့တာကွောငျ့ အမပေုံ့က အားနာသလို နရေခကျနသေလို ဖွဈနသေညျဟု သူခံစားရသညျ ။
ရုံးပိတျရကျကရြငျတော့ ဆေးခနျးလေးဘာလေးပွကွညျ့ဖို့ သူစိတျကူးလိုကျသညျ ။ သို့သျော သူ့စိတျကူးတို့သညျ စိတျကူးသာဖွဈပွီး လကျတှမှေ့ာ ဖွဈမလာနိုငျခဲ့ ။
” ဟိုတနကေ့ဆို သူ့သားစားမယျ့ထမငျးပနျးကနျထဲ ရှဖေရုံသီးဟငျးတှထေညျ့ပွီးနယျထားတာ ။ ဘေးကနေ မနျးကြီးသီးစိမျးကွျောလေးပုံပွီး ဇှနျးတပျ ၊ ရနှေေးကွမျးတဈခှကျ အဆငျသငျ့ခထြားတာ …နုငယျက ဘုရားပနျးလဲနလေို့ မသိလိုကျဘူး ။အိမျနောကျဖေး ဝငျကွညျ့တော့မှ …. တအိမျလုံးပှစာကွဲနတောပဲ အကိုကွီးရယျ ။ အမဘောလုပျနတောလညျးဆိုတော့မှ ဒါ..သားငယျလေး အကွိုကျတဲ့ ၊ ငယျငယျကဆို အမွဲခကျြကြှေးရတယျ..ခကျြပွီး အဲ့လိုနယျဖတျပေးမှ သူကစားတာတဲ့ …ဟငျးဟငျး ။သူ့သားက တလုပျစားပွီးငံလှနျးလို့ဆိုပွီး ဆကျမစားဘူး ”
မိနျးမဖွဈသူရဲ့ အပွောကို အကိုကွီးက ပွုံးကာ နားထောငျသညျ ။ ပွီးမှ အမဖေ့ကျကိုကွညျ့ပွီး
” အမကေ ဘကျလိုကျတယျ ။သူ့သားကြ ခကျြကြှေးတယျ.. သားကိုကတြော့ အဲ့လိုမြိုးလုပျမကြှေးဘူး ”
အကိုကွီးရဲ့ စကားကွောငျ့ အမလှေုပျလှုပျရှားရှားဖွဈသှားသညျ ။ သူ့သားကိုအတျောလေးအားနာသှားဟနျ ဖွဈသှားတာကိုလညျး တှရေ့သညျ ။
“အမေ သှားပွငျလိုကျမယျ …”
အမေ ထိုငျနရောက ထတော့ အကိုကွီးက လကျပွကာတားရငျး
” သူတို့အိမျမှာ ခကျြထားတာတှေ မစားခငျြပါဘူး အမရော … သားက အမကေိုယျတိုငျခကျြပွုတျပွီး ကြှေးတာကို စားခငျြတာ ။အမေ ..သားနဲ့ အိမျလိုကျခဲ့နျော ..။သားနဲ့တလှညျ့နပွေီးသားကို ငယျငယျတုနျးကလို ထမငျးနယျပွီးကြှေးမယျ မဟုတျလား ”
အမအေ့သံက ရှငျလနျးလာသညျ ။
ကြှနျတျော အကိုကွီး ဝငျးမောငျရဲ့မကျြနှာကို ကွညျ့မိသညျ ။ အကိုက မကျြစိတဈဖကျမှိတျပွရငျး အမဖေ့ကျလှညျ့ကာ
” အမေ ၊ အမအေ့ကငြ်္ီတှေ သှားယူလေ ..သား တျောကွာနပွေနျတော့မှာ ”
“အေး ၊ အေး ”
အမေ ထိုငျနရောမှ ခပျသှကျသှကျထကာ အိပျခနျးထဲဝငျသှားမှ အကိုကွီးက သူ့ဖကျလှညျ့ပွီး
” အမကေို့ အကိုချေါသှားလိုကျမယျ ။ မငျးတို့လညျးဝနျထမျးတှဆေိုတော့ ကသီလငျတနိုငျမှာပဲ ။ အကိုလညျး တပါတျတခါ လာလာကွညျ့ရတာ ခရီးထောငျ့တယျ ..အိမျချေါထားလိုကျတော့ အားလုံးအဆငျပွတောပေါ့ ၊ အကို့အလုပျက စာရေးတာဆိုတော့ အပွငျသှားစရာလညျး သိပျမလိုဘူး ။ခွံထဲမှာ ငါ့တပညျ့ ဖိုးကဲတို့ မိသားစုရှိနတေော့ အမလေညျး ပြျောမှာပါ ”
မိနျးမမကျြနှာက ပြျောသှားသလို ဝငျးကနဲ ဖွဈသှားတာကို သူမွငျလိုကျသညျ ။သူလညျး စိတျအေးသှားတာကွောငျ့ မချေါပါနဲ့ ဘာညာ ပွောမနတေော့ ။ ကွာရငျ မိနျးမနှငျ့အမကွေ့ား အဖုအထဈလေးတှေ ရှိလာမယျ့အရေးမှ ကငျးသှားသညျဟု ဆိုရပမေညျ ။ ခဏကွာတော့ အမေ အထုတျလေးဆှဲကာ ပွနျထှကျလာသညျ ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ဖကျကို သိပျမကွညျ့ ။
စိုးမောငျ အမနေ့ားကပျကာ အမလေ့ကျကလေးကို အသာဆှဲယူပွီး အမပေ့ါးတဈဖကျကို နမျးတော့ အမေ မကျြရညျဝဲသညျ ။
အမစေ့ကားက သညျလောကျသာ ။ ဒါပမေယျ့ အမမေ့ကျြလုံးတှကေတော့ စကားတှအေမြားကွီးပွောနသေလိုပငျ ။ အိမျထောငျကကြတညျးက သူခဈြသောသားဆီမကွာမကွာလာနရေငျး ကလေးဝယြောဝစ်စတှကွေောငျ့စိတျမခဘြူးဟုဆိုကာ မပွနျတော့ပဲအတူတူနတောမို့ သူ့ကို အမဘေယျလောကျခဈြမှနျး သူအသိဆုံးပငျ ။ ဒါပမေယျ့ အမကေ သူ့ကို သိပျမကွညျ့သလို ခံစားရတော့လညျး သူစိတျမကောငျး ။
ပွနျခါနီးကတြော့ အကိုကွီးက သူ့ပခုံးကိုဖကျကာ ခပျတိုးတိုးပွောသှားသညျ ။
“မငျး အမမေ့တ်ေတာနဲ့ နယျထားတဲ့ ထမငျးကို ကွိတျမှိတျစားသငျ့တယျ ငါ့ညီ”
အကိုကွီးမကျြနှာကိုကွညျ့ပွီး သူ ဘာစကားမှ မဆိုမိ ။
ဒီလောကျငနျတဲ့ထမငျးကို ဘယျလိုလုပျစားမလညျးဟုသာ စိတျထဲက စောဒဂတကျမိသညျ ။ အကိုကွီးကလညျး သူတို့ကို ဘာစကားမှ ဆကျမပွောတော့ ။အမကေို့သာ အငှားကားပျေါတငျပွီး သူ့အိမျပွနျသှားသညျ ။
“တျောပါသေးရဲ့ ၊ရှငျ့အကိုသာလာမချေါရငျ ကြှနျမလညျး ဖုနျးဆကျပွောမိတော့မှာ။ သူကလူလှတျမို့ ပွသနာမရှိဘူး ၊အမဒေီလို ဖွဈနတောကွာလာလေ ကြှနျမတို့နဲ့အဆငျမပွဖွေဈလေ ဖွဈတော့မှာ”
“အဲ့လိုတော့ မပွောပါနဲ့မိနျးမရယျ ၊အမလေညျးသူတာဝနျယူနိုငျတဲ့အခြိနျက အားလုံးလုပျပေးခဲ့တာပဲမဟုတျလား”
“အမလေး….. ကိုမြိုးခဈြ။ အမကေိုထိလို့ကိုမရပါလား။ကြှနျမက အဖွဈပွောတာပါတျော။ကြုပျလညျး ယောက်ခမကို ခြီးကလူသေးကလူ ပွုစုရတာ ပါပဲ၊ကိုယျ့မအတေောငျလုပျပေးခှငျ့ရတာမဟုတျဘူး”
မိနျးမဖွဈသူကိုကွညျ့ပွီး သူစိတျပကျြစှာခေါငျးယမျးမိသညျ။ ထိုနကေ့စပွီး အမရေော အကိုကွီးပါ သူ့အိမျကို သိပျမလာတော့ ။
သူလညျး အမဆေီ့ကို မရောကျဖွဈတော့ ။
တခါတလေ သှားကနျတော့လြှငျတော့ သနပျခါးတှဖှေေးနအေောငျလိမျးထားသောအမကေ ပွုံးပွုံးကွီး ဆုတှပေေးသလို ပြျောနဟေနျကလညျးအတိုငျးသားပငျ။
အကိုကွီးကတော့ အမဆေီ့မကွာမကွာလာဖို့ သတိပေးရှာသညျ။
“အမေ ငယျမူပွနျခငျြနသေညျ”ဟုလညျး ခပျတိုးတိုးသတငျးပေးပမေယျ့ အစိုးရဝနျထမျးဖွဈသူ သူ့မှာ အမွဲမရောကျနိုငျ။
ဒါပမေယျ့အမကေတော့ သူလာခွငျးမလာခွငျးကို စောငျ့ဆိုငျးမနတေော့ ။အိပျယာထဲလှဲနရေငျး ဦးဏှောကျသှေးကွာပွတျကာ နှုတျဆကျသှားလတေော့သညျ။
မကျြနှာပျေါတဖှဲဖှဲနှငျ့ မသိမသာစငျသောအထိအတှကွေ့ောငျ့ သူ အိပျယာက လနျ့နိုးလာသညျ။ မိုးကလညျးသညျးလိုကျတာဟုတှေးရငျး ပှငျ့နသေောပွတငျးပေါကျကို တယောကျယောကျမြားလာပိတျမလားဟု မသိမသာမြှျောနပေမေယျ့ တအိမျလုံး ဘာသံမှမကွားရတာကွောငျ့သူ စိတျလြှော့လိုကျသညျ။ ပွတငျးပေါကျတံခါးကိုလတေိုးသံနှငျ့အတူ မိုးက တရစပျပကျလာသော့ကွောငျ့ သူ့အောကျပိုငျးတဈခုလုံး စိုထိုငျးလို့လာသလို အပေါ့သှားခငျြစိတျတှကေလညျးထိနျးမရအောငျဖွဈ၍လာလသေညျ။ မဖွဈ။ အိပျယာထဲဆီးသှားလို့မဖွဈ ။ အိပျယာခငျးစိုထိုငျးထိုငျးနှငျ့သူမနနေိုငျ။ ဘယျသူကမှလညျး တခုတျတရ လာလဲပေးမှာမဟုတျ။ ကိုစိုးမောငျ အတငျးခြုပျတီးထားသညျ့ကွားမှ ဆီးကထိနျးမရပဲ ထှကျကလြတေော့သညျ။
လဖွေတျထားသဖွငျ့ ဝူးဝူးဝါးဝါးဖွဈနသေောသူ့အျောသံက မိုးသံတှကွေားမှာ ပြောကျသှားလသေဖွငျ့ ဆကျပွီးကွိုးစားမနတေော့။ ဝမျးနညျးစိတျက လှိုကျကနဲတကျလာသလိုမိနျးမဖွဈသူရဲ့မကျြနှာကိုလညျး ပွေးမွငျမိသညျ။တဖနျ သမီးဖွဈသူအိအိရဲ့ ငွူစူသံ၊ သားမကျဖွဈသူရဲ့ နငျပဲငဆပွောသံတှကေို နားထဲကွားမိပွနျသညျ။ “အမဝေ့ဋျတှလေညျနပေါပွီ အမရေယျ”ဟု စိတျကတှေးရငျး အကိုကွီးမဆုံးခငျပွောခဲ့သောစကားကိုကွားကာ ဝမျးနညျးစှာ ငိုမိတော့သညျ။
“ဒီတံမွကျစညျးကိုကွညျ့ ငါ့ညီ ၊အသဈတုနျးကမငျးအိမျရှခေ့နျးမှာထားတယျ ၊ကွာလာတော့ အမှေးတှတေုံးလာပွီးလှဲမကောငျးတော့ဘူး။အဲ့တော့ နောကျဖေးမှာလှဲပွီး အိမျရှအေ့တှကျအသဈဝယျတယျ။အဲ့တံမွကျစညျးလညျးဟောငျးလာရငျ မငျးနောကျဖေးပို့ဦးမှာပဲ။ နောကျအသဈဝယျဦးမှာပဲ။အဲဒီအသဈကလညျး တနကြေ့ ဟောငျးလာဦးမှာပဲ …သံသရာဆိုတာ လညျနတောငါ့ညီ ။ဒါကွောငျ့ မငျးတို့တှေ အမအေ့ပျေါ နိုငျ့ထကျစီးနငျးကွီးမပွောပါနဲ့ ကှာ….။မိဘဆိုတာ အစားထိုးစရာလညျးမရှိဘူး။ရှိနတေုနျးကြေးဇူးဆပျခှငျ့ရတာ..ဝအောငျဆပျကွပါ ။ မငျးတို့တှလေညျး အိုကွ နာကွဦးမှာပဲ။ တနကေ့ရြငျ အသဈမှနျသမြှဟောငျးကွရတာပါ ။မငျး တရားရစမျးပါ”
“ကြှနျတျောတရားတှလေညျးကြ ၊ တရားတှလေညျးရပါပွီ အကိုကွီးရယျ။ သမေငျးရယျ…..ကြှနျတော့ကို မွနျမွနျသာလာချေါကွပါတော့ ”
ယောကျာ်းတွေကိုစိတ်နာ ဒီနေရာကို အတွဲလာ ကွဲစေ ဆိုတဲ့ကျိန်စာ (သို့ မဟုတ်) မိန်းမရဲ တောင်တော် သခင်မ သမိုင်းအကြောင်
သင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း(၁)ရက်လေးလွန်တာနဲ့ ဒဏ်ငွေ (၂၅၀၀၀)ဆောင်ရမည်ဆိုတာသင်သိပါသလား
နစ်သက်လို့ အကြိမ်ကြိမ် ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စကားလုံးများ
View all posts by TjrxgWfzULaCgCdvDE →
အွန်လိုင်းရည်းစားကတွေ့ ဖို့ ချိန်းကာဆေးခပ်ပြီး အုပ်စုလိုက်အဓမ္မပြုကျင့်တာကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့မိန်းခလေး
အမျိုးသမီးများအ​ပေါ် လိင်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ အကြမ်းဖက်​ပါက အမြင့်​ဆုံး ​သေဒဏ်​ချမှတ်​နိုင်​မည့်​ ဥပ​ဒေကြမ်း ​ရေးဆွဲပြီးစီး
ဘုရားပြုပြင်ရန် သိန်း၁၀၀၀ မတည်လိုက်သည့် ဘုရားဒကာ အလှူရှင် ဇနီးမောင်နံ သိန်း၁၀၀၀ လှူတယ်ဆိုလို့ မြို့က သူဌေးကြီး လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့
ဖိုးသဲကို နှစ်ကိုယ်ကြား မှာတမ်းခြွေလိုက်တဲ့ ဦးကျော်သူ၏ စကားလုံးများ
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်မှ ၂၂ ရက်အတွင်း . (၁) ပတ်စာဟောစာတမ်း – ဆြာမင်းသိမ်းခိုင်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချင်းချင်း စကားများကြရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက် မြန်မာ့နည်းပညာယူသုံးလိုက်သော အစ္စရေး
အမြန်လမ်းက အလုပ်သမား ၁၀ ယောက်ကို ပါလာတဲ့ လက်စွပ် ၁၀ ကွင်းနဲ့ ငွေ ၂ သောင်းစီလှူလိုက်တဲ့ ချိန့်ချိန့်သဲအလှူတော်ကြီး
9Style - Copyright © All rights reserved.